Ulwandle lunemithombo eyahlukeneyo ekwaziyo ukuvelisa amandla | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Nuria | | Amandla omoya, Amandla eNtshukumo, Umoya ovuselelekayo, Itekhnoloji entsha
Ngaphakathi kweentlobo ezahlukeneyo ze amandla ahlaziyekayo, ezo zinolwandle njengowona mthombo wazo ziphambili. Le ngxelo isukela kwinto yokuba kungekho "zithunzi" elwandle, izixhobo ezinje ngomoya, umzekelo, zinokuxhatshazwa ngokupheleleyo. Ngamanye amagama, akukho zithintelo kwaye umoya ungasetyenziswa ngokupheleleyo kwimeko yoomatshini bomoya, abathi ngee blades zabo ezinkulu baqokelele umoya kancinci kancinci bawuguqule ube ngamandla kwipesenti ephezulu.
Ngaphandle kwamathandabuzo, umoya waselunxwemeni uye waba lolona hlobo luphindaphindwayo kuhlobo lwalo, esele ifikile ekupheleni kuka-2009 yayinamandla afakelweyo angamawaka amabini nama-2 Mw kwaye nangona kukho iinkokeli kwicandelo elinjengeDenmark ne-United Kingdom, amazwe anjenge China bazibophelele ekwandiseni amandla abo, nasekuphuhliseni uphando, uphuhliso kunye nobunjineli obunobuchule obuvumela ukuxhaphaza okuphezulu iifama zomoya zonxweme ngokuphuhlisa oomatshini bomoya enokusebenza ngokufanelekileyo ukusuka elwandle.
Kodwa elwandle ngumthombo wezixhobo ezininzi, ngale ndlela amandla aveliswa ngamaza (amandla Imoto yamaza) unokuguqulwa ube ngumbane.
Nangona ingaphuhliswanga kangako, ineetekhnoloji zovavanyo:
-Izakhiwo ezimiliselwe elunxwemeni okanye elwandle (isizukulwana sokuqala).
-Ulwakhiwo lwaselunxwemeni olunezinto ezidadayo okanye ezantsi emanzini aphezulu (isizukulwana sesibini).
-Ulwakhiwo lwaselunxwemeni, emanzini anzulu anomda weemitha ezili-100, ngezinto ezidadayo okanye ezomileyo zabaqokeleli (isizukulwana sesithathu).
-Kwilizwe laseBasque iprojekthi iyaphuhliswa ngetekhnoloji ebizwa Ukuhlalisa ikholamu yaManzi apho intshukumo yamaza ivelisa uxinzelelo kumthamo womoya oqulethwe kwikholamu engene emanzini, inamandla aneleyo ukuba umoya lowo usebenze kwaye usebenzise i-injini yomoya.
- Ezinye izixhobo zikhona izifunxi okanye izithambisi, Athatha ithuba lokuhamba kwamaza ukuvelisa amandla oomatshini aguqulwa aba ngumbane.
- Obunye ubuchwephesha busekwe kwi ukugcwala kweenkqubo kunye neziphelo.
Imalunga nokuthatha ithuba lokunyuka kunye nokuwa kolwandle okuveliswa ngamaza. Umgaqo-siseko kukuba idama lamanzi ligcwaliswe kumaza amakhulu kwaye lichithwe kumaza asezantsi, xa inqanaba lamanzi phakathi kolwandle kunye nedama lifikelela kwinqanaba elithile, amanzi adluliselwa ngeturbine evelisa amandla ombane. E-France (La Rance) kukho indawo enjalo.
Inkqubo ineengxaki zayo: ukuphakama kwamaza kufuneka kugqithe kwiimitha ezi-5, esisithintelo kuba le meko ihlangatyezwa kuphela kwiindawo ezithile. Ububi besibini yile nto ifuthe kwindalo esingqongileyo ephezulu kuba ezi meko zenzeka kwiindawo ezibalulekileyo Izinto eziphila elwandle.
Ukuhlelwa kobushushu base-Oceanic
Ngumahluko wobushushu phakathi komphezulu wolwandle kunye namanzi anzulu, onomahluko wobushushu kufuneka ubengaphezulu kwama-20º C (imimandla yeikhweyitha neyethropikhi).
Itekhnoloji eqala nje kumazwe afana ne-India, Japan ne-Hawaii.
Ibhekisa ekusebenziseni umahluko woxinzelelo phakathi kwamanzi acocekileyo avela emilanjeni kunye namanzi anetyiwa aselwandle. Inkampani yaseNorway ebambe iStatkraft iphuhlisa iprojekthi e-Oslo fjord ngale migaqo.
Isekwe kumahluko phakathi komxholo wetyuwa phakathi kwamanzi omlambo namanzi olwandle. Xa la manzi exubana, kuveliswa amandla anokuguqulwa abe ngumbane.
Ulwandle lubonelela ngamandla amakhulu kodwa iitekhnoloji zokuzisebenzisa zisesigaba sokulinga, ngaphandle komoya waselunxwemeni, osele ukhuphiswano.
Owona mqobo uphambili amandla olwandle lixabiso eliphezulu lokusetyenziswa kwayo, oku kuye kwacothisa ukukhula kwayo xa kuthelekiswa nokunye amandla ahlaziyekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Amandla omoya » Ulwandle lunemithombo eyahlukeneyo ekwaziyo ukuvelisa amandla
Izithuthuthu zombane zamapolisa